Warshad Qaboojiyaha La Qaadan Karo | Shiinaha Soosaarayaasha Hawada Qaboojiyaha iyo Alaab-qeybiyeyaasha
XK-18 / 23SY 18000m3 / h 23000m3 / h qaboojiye biyo qaboojiye biyo warshadeed oo weyn la qaadan karo
XK-18 / 23SY 18000m3 / h 23000m3 / h biyo qaboojiye weyn oo biyo qaboojiye ah XIKOO qaboojiye hawo biyo badan oo la qaadi karo ayaa hoos u dhiga heerkulka iyada oo loo marayo uumi baxa biyaha. Iyo adeegsi hooseeya. waa badeecad u habboon deegaanka. • Keenso hawo nadiif ah XIKOO hawada qaboojiyaha oo leh shabaq cadeynaya boodh si ay hawada u shaandheeyaan, marka deegaanka ...
XK-05SY qol yar oo la qaadan karo oo qaboojiye hawo leh baraf leh XIKOO XK-05SY qol yar oo la qaadan karo oo qaboojiye hawo leh ayaa ah mid caan ah, hoos u dhig heerkulka iyada oo loo marayo uumi baxa biyaha. waana wax yar oo qurux badan, waxaa jira astaamo sida hoos ku xusan: Muuqaal Fiican New ABS Qalabka jirka caag ah, An ...